RASMI: Kooxda Juventus oo shaqada ka cayrisay Macallin Maurizio Sarri kaddib markii xalay laga soo reebay Champions League – Gool FM
(Turin) 08 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa si rasmi ah u cayrisay macallin Maurizio Sarri kaddib markii uu hal sano la joogay, waxaana uu ku hoggaamiyey horyaalkoodii sagaalaad oo xiriir ah ee Serie A.
Kaliya waxa uu Sarri kooxda Juventus u qaaday horyaalkii ugu dambeeyey ee Serie A, kaasoo ahaa horyaalkii sagaalaad oo xiriir ah oo ay kooxda reer Talyaani ku guuleysato.
61-sano irkaan ayaa ka tagay shaqada Juve kaddib markii uu 51 kulan oo tartammo rasmi ah hoggaamiyey, waxaana kulammada uu guulo ku hoggaamiyey kooxda 34 kulan, siddeed kulan barbaro ayay kooxdu gashay waqtigaas, halka sagaal kalena ay guuldarro la kulantay.
Waxaa Sarri shaqada Juventus laga cayriyey kaddib markii xalay kooxda Lyon ay ka soo cirib tirtay tartanka xiisaha leh ee UEFA Champions League.
Heshiiska uu kula jiray kooxda Juventus waxa uu ku ekaa bisha June ee sanadka 2022-ka, laakiin heshiiskiisa waa la burburiyey kaddib hal xilli ciyaareed oo uu kooxda joogay.
83-dhibcood ayuu Sarri horyaalka Serie A ugu qaaday kooxda Juve xilli ciyaareedkan, waana in ka badan dhibcaha ay heleen xilli ciyaareed kasta intii lagu jiray sagaalkiisano ee xiriir ahaa oo ay ku guuleysanayeen horyaalka Talyaaniga, iyadoo laga dhaliyey 43 gool 38 oo ay ciyaareen kal ciyaareedkan.
Kooxda lagu naynaaso Bianconeri ayaa dhalisay 76 gool oo horyaalka Serie A ah kal ciyaareedkan, waana in ka yar inta gool oo ay horyaalka ka dhaliyeen Atalanta, Inter, Lazio iyo xitaa Roma oo ku dhammaysatay kaalinta shanaad.
Xilli ciyaareedkii 2018-19 macallin Maurizio Sarri waxa uu ka tagay Chelsea kaddib markii uu kula guuleystay Europa League, halka xilli ciyaareedkan 2019-20 macallin Maurizio Sarri laga cayriyey shaqada kooxda Juventus kaddib markii uu kula guuleystay horyaalka Serie A.
Labo xilli ciyaareed, labo kooxood oo kala duwan iyo labo koob, hadda Maurizio Sarri waa shaqo la’aan.